Shiinaha 3D Maro adag-xidhkii Fabric-saareyaasha iyo shirkado | Beihai Fiberglass
Dharka '3-D spacer' wuxuu ka kooban yahay laba dusha sare oo dhar ah oo laba-geesood leh, oo si farsamaysan ugu xidhan meerisyo tolmo toosan leh.
Iyo laba tuubbo oo S-qaabeeya ah oo isu taga si ay u noqdaan tiir, 8-qaabeeya jihada fidsan iyo 1-qaabeeya jihada weft.
Dharka '3-D spacer' wuxuu ka kooban yahay laba dusha sare oo dhar ah oo laba-geesood leh, oo si farsamaysan ugu xidhan meerisyo tolmo toosan leh. Iyo laba tuubbo oo S-qaabeeya ah oo isu taga si ay u noqdaan tiir, 8-qaabeeya jihada fidsan iyo 1-qaabeeya jihada weft.
Astaamaha wax soo saarka
Dharka '3-D spacer' waxaa laga samayn karaa fiber galaas, kaarboon kaarboor ama fiber basalt. Sidoo kale dharkooda isku dhafan ayaa la soo saari karaa.
Baaxadda dhererka tiirka: 3-50 mm, baaxadda ballaca: ≤3000 mm.
Naqshadaha qaabab dhismeedka oo ay ku jiraan cufnaanta aagga, dhererka iyo cufnaanta qaybinta tiirarka waa la rogrogmi karaa.
Isku-darka dharka 3-D spacer wuxuu bixin karaa iska caabbinta maqaarka-maqaarka sare iyo caabbinta saameynta iyo caabbinta saameynta, miisaanka fudud qallafsanaan sare, kuleyliyaha heerkulka ee aadka u fiican, biyo xireynta acoustic, iyo wixii la mid ah.
3D Fiberglass-xidhka Qalabka Nalalka
Miisaanka Bedka (g / m2)
Cufnaanta Qoyan (dhammaad / cm)
Cufnaanta Weft (dhammaadka / cm)
Xoog siligga oo qulqulaya (n / 50mm)
Weft xoog silig ah (n / 50mm)
Su'aalaha caadiga ah ee suufka Beihai 3D ee dunta leh
1) Sideen ugu dari karaa lakabyo iyo waxyaabo kale dharka Beihai3D?
Waxaad ku codsan kartaa waxyaabo kale (CSM, roving, foam iwm) oo ku qoyan dharka Beihai 3D. Ilaa 3 mm galaas ah ayaa lagu duudduubi karaa Beihai 3D qoyan kahor dhammaadka waqtiga dhammaadka iyo xoogga guga-dambe oo buuxa ayaa la damaanad qaadi doonaa. Kadib lakabyada jel-waqtiga ee dhumucda ka sareysa ayaa la dahaarin karaa.
2) Sidee loo codsadaa lakabyada qurxinta (tusaale ahaan daabacaadda HPL) ee dharka Beihai 3D?
Dahaarka qurxinta ayaa loo isticmaali karaa dhinaca caaryada oo dharka ayaa si toos ah loogu dhejiyaa dusha lakabka ama qurxinta qurxinta ayaa lagu duubi karaa dharka Beihai 3D ee qoyan.
3) Sidee loo sameeyaa xagal ama qallooca Beihai 3D?
Mid ka mid ah faa'iidooyinka Beihai 3D waa in si buuxda loo qaabeyn karo loona rogi karo. Si fudud ugu laabo dharka xagalka la rabo ama qalooca caaryada oo si fiican u rogo.
4) Sideen u midabeyn karaa laminate 3D-ka Beihai?
Adoo midabeynaya cusbada (ku darista midabkeeda)
5) Sideen kuheli karaa dusha sare ee lakabyada 3D ee Beihai sida dusha siman ee shaybaaradaada?
Dusha sare ee jilicsan ee shaybaarku wuxuu u baahan yahay caaryo jilicsan oo suntan, tusaale ahaan galaas ama melamine. Si aad uhesho dusha sare ee labada dhinacba, waxaad ku dalban kartaa caaryo dufan labaad ah (caag xajin) dusha Beihai 3D qoyan, iyadoo la tixgelinayo dhumucda dharka.
6) Sideen ku hubin karaa in dharka Beihai 3D gebi ahaanba la galiyay?
Waxaad si fudud ugu sheegi kartaa heerka daahfurnaanta haddii Beihai 3D si wanaagsan loo qoyay. Ka fogow aagagga xad-dhaafka ah (ka-mid-noqoshada) adoo si fudud ugu rogaya miisaanka xad-dhaafka ah geesaha- iyo ka soo baxa dharka. Tani waxay ka tagi doontaa xaddiga saxda ah ee cusbada ku harta dharka.
7) Sideen uga fogaan karaa daabacaadda gelcoat-ka Beihai 3D?
• Codsiyada badankood, xijaab fudud ama lakabka CSM ayaa ku filan.
• Codsiyada muuqaalka ah ee muhiimka ah, waxaad isticmaali kartaa jaakad xayndaabka daabacaadda-xannibaadda ah.
• Dariiq kale waa in loo daayo maqaarka dibedda inuu daweeyo ka hor inta aan lagu darin Beihai 3D.
8) Sideen ku xaqiijin karaa hufnaanta Beihai 3D laminate?
Translucency-ku waa natiijada midabka xarkaha, la xiriir alaab-bixiyehaaga.
9) Waa maxay sababta kor u kaca (gadaal guga) awoodda dharka Beihai 3D?
Beihai 3D Glass Fabrics waxaa si xariifnimo leh loogu qaabeeyey habab tayada dabiiciga ah ee muraayadda. Muraayaddu waa 'foorarnaan kartaa' laakiin 'been laguma ridi karo'. Qiyaas dhammaan ilahaas oo dhan inta laamiinka ah oo kala riixaya qalabka wax lagu duubo, miisku wuxuu kiciyaa ficilkan (sidoo kale loo yaqaan 'capillarity').
10) Dharka Beihai 3D sifiican uma bogsado, maxaan sameeyaa?
Laba xal oo macquul ah
1) Markaad la shaqeyneyso makiinadaha ay ku jirto styrene, qaboojinta styrene ee is bedbedesha ee la maroojiyey Beihai 3D waxay sababi kartaa ka hortag daawo. Nooca xarkaha (er) styrene emission (LSE) ee cusbada ama haddii kale lagu daro soosaaraha soosaarida hawo soosaarida styrene (tusaale ahaan
2) Si loo magdhabo cufnaanta hoose ee cusbada isla markaana ay hoos ugu dhacdo heerkulka daweynta ee dunta dusheeda, waxaa lagu talinayaa daawo aad u falcelin badan. Tan waxaa lagu gaari karaa iyadoo la kordhiyo heerka kalideeyayaasha iyo iyadoo la kordhiyo heerka (doorbidayo kalluumeysiga) oo lagu magdhabo xakameeye si loo dejiyo waqtiga jelka.
11) Sideen uga fogaan karaa waxyeelada ku haysa tayada dusha sare ee Beihai 3D (laalaabkii iyo laalaabkii ku jiray).
Kaydinta ayaa muhiim u ah hubinta tayada: ku duub duub duudduuban si qallalan jawi qalalan heerkulka caadiga ah ka fur dharka si siman hana u laaban dharka.
• Laabashada: waxaad ka saari kartaa laalaabka adigoo si dhib yar uga rogaya rullaluistemka laalaabka markii aad ku wareejinaysid agtiisa
• Laablaabid: si tartiib ah ugu laalaabista laalaabka ayaa si fudud u sababi doonta inay baaba'do
Hore: 3D FRP Panel oo leh cusbi
Xiga: Xiran Roving Combo Mat
3d Xidhmada Dharka
3d-xidhkii Glass Fiber Fabric